Nei Kuwana Yako Yekusaziva-Allocentric Balance Iri Zvakakosha Zvakakosha - Pfungwa
Kugadzira chiyero pakati pezviito zvekuzvifunga uye zvinhu zvatinoitira vamwe zvakakosha. Hutano hwedu nekugara zvakanaka zvinoenderana nekugona kwedu kuzvitarisira isu pachedu. Asizve, sevanhu venharaunda, basa redu munharaunda rinotsigirawo bumbiro redu kusvika padanho rakadai, zvinogona kupikiswa kuti hunhu hwedu hwese hunotsigira hupenyu hwedu pachedu.
Saka zvinorevei kuva egocentric kana allocentric, uye tinoita sei kuwirirana pakati pemaitiro maviri anopikisana? Kuti titarise izvi zvakadzama, tinoda makuki akabikwa kumba!
Maitiro egazeri iri nezve kutamba chinzvimbo chinotungamira muhupenyu hwako. Zvinoda kushinga uye kuvimbika ku uzvide . Kugamuchira zvaunokanganisa uye kuziva kurota kwako rwendo rwehupenyu. Zvakare, chinzvimbo chedu sezvisikwa zvemagariro chinoita kuti zviparadzanise iyo 'Me' kubva kune 'Isu' maitiro anovhiringidza uye akakwenenzverwa. Mune inokurumidza kufamba, midhiya yakazadza nyika, ichiregeredza mafoni ekuda kukwikwidza yazvino 'bheji kuti ive yako' hazvisi nyore.
Uyezve, kana iwe ukawana nzira inoenda kune yako yechokwadi 'ini', iwe uchiri kuda kushanda mukati medu tsika tsika. Hunhu hwakawanda hwekwekufunga hunoguma nezviito zveudyire. Hunhu hwekuzvifunga hwakadai hunogona kukubvisa kubva munharaunda yako. Nekudaro, kuve egocentric hakusi kwekuzvida kugara uchitora cookie yekupedzisira, zviri pamusoro pekuziva kuti iwe unochida.
Allocentric maitiro kunze kwekutarisa kutarisa kwako uye zviito zviri pane vamwe. Semuenzaniso: dhiraivha yekubheka makuki kune mumwe kunakidzwa. Hunhu hweAllocentric hunokubatsira iwe kuti uzive munhu wega wega senyeredzi muhupenyu hwavo, zvichikusiya uine basa rekutsigira. Ndezvekuisa zvinodiwa zvavo pakutanga.
Rondedzero ye'vamwe 'inogona kuve isingagumi mhuri, shamwari, uye vavakidzani kuburikidza nenharaunda yepasi rose. Endeavors senge 'mvura ye Africa' kana 'ponesa nyika' zvinotibvumidza kuti tibatanidze kupfuura kwedu kwenzvimbo nzanga uye tinzwe kuve nemhosva yezvikonzero zvakanyanya kure kure.
Kana tichiita allocentric zviito, simba rinogona kukurumidza kupera kunze kwedu pachedu, uye kwete hazvo kuiswa mari munzira yekusarudza kwedu. Uye zvakadaro zviito zvedu zvinowanzo bvumidzwa zvemagariro. Saka chiyero chiripi?
Rimwe rematambudziko mukuyedza kuumba kuwirirana pakati pemativi maviri aya nderekuti rakaomarara sei rimwe nerimwe. Kuitira vamwe zvinhu zvinoita kuti tinzwe zvakanaka, semuenzaniso kuwana kuzivikanwa nekuda kweizvozvo kunoita kuti tinzwe kutonyanya.
jamie watson jamie lynn mapfumo
Iwe Uri A 'Kunzwa' Kana Iyo 'Intuitive' Hunhu Type?
Izvo Chaizvo Zvinoreva Kuva Nemutsa Kwauri
Maitiro Ekubatsira Vamwe Munguva Yadzo Yekuda
Chii Chaicho Chaicho Mushandi Wechiedza Uye Unogona Kuva Mumwe?
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kunzwira Tsitsi: 8 Nzira dzeKuratidza Tsitsi Muhupenyu Hwako
Saka, dzokera kuki… kana ukabheka tireyi izere nemakuki uye wozvidya zvese, unonzwa uine mhosva (uye pamwe uchirwarawo!) Zvisinei, kubika uye kupa makuki kunoita kuti unzwe zvakanaka. Vanhu vanokoshesa makuki ako epamba. Vamwe haambozvigadziri yavo, saka nyatsoida kana iwe uchivaita. Vamwe vanoshuvira kushanya kunouya nekutakurwa kwecookie. Vamwe vanofarira izvo zvinoita kuti ufare kugadzira makuki. Nepo vamwe vachingo hanker mushure mekutapira kunonaka.
Iwe unoda nzira iyo inoita kuti iwe unzwe uchiona ese aya anofara makuki muniki, saka unoramba uchibheka. Isu tiri vanhu vehukama kutarisira vamwe kunotipfumisa ne pfungwa yechinangwa uye kugara zvakanaka. Dzidziso yekushanduka-shanduka inotinongedza munzira iyoyo. Tsumo yekuti 'hapana chinhu chakadai sekuzvipira' inoratidza kuti panogara paine mubairo wekuzvipira.
Hudzi hwemhuka hunopa mienzaniso mizhinji yekuzvibata. Izvo zvakanyanya kuomarara chimiro chemagariro, kunyanya kuzvipira kuri mukati mayo tsika. Tsoko dzeVervet dzinoisa hupenyu hwavo panjodzi kusimudza alarm yekuvapo pamberi pechikara. Masvosve, nyuchi uye nezvimwe zvipuka zvemagariro zvinoshanda sechikwata uye zvinopa hupenyu hwazvo kuna mambokadzi wazvo. Dzidziso yaDarwin inoratidza kuti kusarudzika kwezvisikwa kunowanzo farira avo vanofarira vamwe.
Saka, dzokera kumuenzaniso wekugadzira makuki… mhuri uye shamwari vanofarira kugadzira makuki ivo vanobhadhara zvakakwana zvinoenderana nezve makuki, asi ivo vanotarisirawo hupenyu hwako. Kukurukurirana munharaunda kunoitika kunokusimbisa iwe - mugadziri wekuki - ane nzvimbo munharaunda. Inobhadhara kuva mugadziri wekuki. Muhupenyu chaihwo, izvi zvinopfuura kungoita chimwe chete-chakanaka chiito chakanaka.
Ikoko kwaizove, ipapo, kunoratidzika kunge kune anopfuura mwero mumwe kune allocentric maitiro:
Chiito chepanyama chemutsa usina kufunga.
Chiito mukufarira kwevamwe chinoguma nemanzwiro 'ekunzwa zvakanaka'.
Maitiro ane maitiro akanaka kune zvakatipoteredza kana munharaunda.
Izvi zvinokumbira iwo mubvunzo: mune ino yepasi rose nyika yatinogara, kusvika papi 'nharaunda' inotambanuka? Kune here chero miganho kune angangoita allocentric mabasa? Kuziva zvakavanzika kunozivikanwa nezvemhuri yedu uye shamwari padanho risina kumboonekwa nezvizvarwa zvakapfuura. Nekuwedzera, isu tinogara madaro akareba kure nevatinoda, asi isu tinogona ikozvino kuziva izvo mumwe nemumwe zvaari kudya kubva kuhafu nzira kutenderera pasirese sezvo yakanamirwa nemagetsi kune edu mazhinji michina. Izvi zvinowedzera here manzwiro edu ebasa kunharaunda yedu yepasi?
Nhau dzenjodzi dzinongoitika dzega uye nenjodzi dzakaitwa nevanhu mamaira kubva patinogara dzinogara dzichiparidzwa kuimba yekutandarira. Idzi nyaya dzinomutsa kunzwira tsitsi kwedu kutambura kwevamwe vedu vanhu here? Dambudziko, chokwadika, nderekuti zviwanikwa zvinogumira. Ucharangarira iwo makuki? Mushure mekubheka kwezuva rose, unogara pasi wakaneta, wagadzirira kurapwa, asi hauna makuki asara. Wakavapa vese ukasara kunzwa kutorwa sezvisina basa .
Chiyero pakati pe egocentric uye allocentric maitiro inowanikwa nekuyera zviito zvako zvinoenderana neyako mamiriro uye zvaunofarira. Iwe unofanirwa kuzvitarisira kuti uve nechokwadi chekuti une simba uye chimiro chekutarisira vamwe . Kuchengeta vamwe kuchakupa mhinduro yemagariro (manzwiro akanaka emafaro, kudzikisira kushushikana senge mhosva) izvo zvinokurudzira kuzvikoshesa uye mufaro mukati.
Chekupedzisira, tinorangarirwa nezvatinoitira vamwe izvi ndizvo zvinhu zvinoita 'mutsauko'. Rangarira, kana iwe ukasawana kudya cookie nguva nenguva, unogona kurasikirwa nehunhu hwekuzvibikira ivo vamwe!
ini handina chero zvibodzwa
mukomana anondibata semwana mudiki
ndiani nxt shasha
zvakaipa zvinogara zvichiitika kwandiri
ndinonzwa sekuti handina shamwari asi ndinazvo